Isku halaynta aaminka iyo astaamaha ilaalinta hantida
Kalsoonida ka timaadda badda waa gaariga ugu adag ee ilaaliya hantida la dhisi karo. Tilmaamaha badbaadada waxay ka bilaabmayaan kala-goynta hantidaada sharciyada xukunka guriga waxaadna ku dhamaanaysaa sharciga aaminka ee xeebtaada. Xulista awooda lagu dhisayo aaminaada hantida ayaa ah talaabooyinka ugu muhiimsan qorshaynta.
Ammaanada waxaa loo aasaasay (ama loo dejiyaa) faa'iidada kafaa'ideystayaasha kalsoonida, waxaa maareeya wakiilka iyo ilaaliyaha aaminka. Aaminaada ilaalinta hantida waxaa sidoo kale loo yaqaan is aaminid hanti ma guurtada ah, taas oo micnaheedu yahay aaminid ilaalin waxaa loo abuuri karaa naftiisa maalkiisa. Aaminaadahani waxay kuxiran yihiin qaab sharciyeed oo hagaagsan oo qodobo ilaalin ah.
Belize Trust Trust Trust
Sababta loo Sameeyo Aaminaada Belize
Belize waxay cusboonaysiisay sharciyadooda aaminaadda iyagoo leh astaamo horumarsan oo loogu talagalay maalgashadayaasha ku sugan xeebaha. Si loogu qalmo mid ka mid ah aaminaadahan deggane ma noqon karo degane Belizean oo hantida ku keydsan aaminka kuma yaallo gudaha ama dhulka Bellize.
degto iyo ka-faa'iideysteyaashu kuma degi karaan Belize
Hantida aaminaadda kuma dhex qaadi karto dhul ku yaal Belize ama waxay noqon kartaa aaminaad ujeeddo leh ujeedo ama qayb Belize ah
sharciga saxda ah ee aaminaada ayaa ah Beeliis
Dhammaan Truste-yada Belize waa hay'ad canshuur la'aan ah astaamahan wax ilaaliyana waxaa lagu daraa aaminida hanti hantiyeed. Belize wuxuu noqday xukunkii ugu horreeyay ee u oggolaanaya in gogol go'an oo aaminaadda ah lagu xukumo sharci kale oo awoodda xukunka ah.
Waxaa jiray in la tirtiro sharciga jiritaanka kalsoonida ee aaminka - aaminada-aan-sadaqada laheyn waxay ku xadidan tahay ugu badnaan 120 sano iyo aaminida sadaqada aan xad laheyn.
Faa'iidooyinka badbaadada kalsoonida Belizean aad bay u sarreeyaan - shaqsiyaadka ka doonaya ilaalinta hantida furitaanka, deyn bixiyayaasha, go'aammada iyo isku-darka, kalsoonida hantida badeecadaha ee lagu aasay Belize waa inay ugu sareeyaan liiskaaga si aad u sahamiso. Qodobbada ayaa ka joojinaya hantida kalsoonida lagala wareego khayaanada, kicinta iyo meelmarinta fulinta ficillada xukunka ee sida caadiga ah loo isticmaali karo in lagu gaaro hantida. Asturnaanta kalsoonida Belize waa faa iidooyin kale oo xoog leh kuwa ka liita inay fiirsadaan.
Qiimaha iyo khidmadaha
Kuwaas waxaa lagu soo daray qorshahaaga ilaalinta hantida Belize Trust, dheefaha dheeraadka ah iyo keydinta markaad furato koonto bangi oo dibedda ah iyo Shirkadda Xannaanada Xaddidan ee Maareynta Kalsoonidaada. Waxaan bixinaa qorsheyaal maamul oo dhameystiran, magacaabid, wakiil wakiil iyo adeegyada ilaalin aamin ah.
Adeegyada soo socda ayaa lagu soo daray. Weydii gudaha waxyaabaha gaarka ah sababta oo ah aaminid iyo shuruudaha shaqsi walba way kala duwan yihiin.
Diyaarinta Aruurinta Awoodda Kalsoonida ee loogu talagalay ilaalinta hantida
Adeegyada aaminka (sanadkiiba)
Wakiilka diiwaangashan (sanadkiiba)
Adeegyada Nominee (sanadkiiba)
Diiwaan galinta kalsoonida
Waxaan bixinaa xafiiska degenaanshaha, wakiilka iyo barnaamijyada maareynta iyo sidoo kale adeegyada ilaalinta iyo magacaabista. Inta lagu guda jiro wada tashigaaga bilaashka ah waxaan kuu sharixi doonaa habab kala duwan oo loo qaabeeyo kalsoonidaada.
Wakiilka diiwaangashan ama xafiiska
Magacyada wakiilnimada iyo ilaaliyaha
Wakiilka guuleysta iyo magacyada ilaaliyaha
Caddaynta aqoonsiga ee deeq qaataha kalsoonida, ka-faa'iideystayaasha, wakiilka iyo ilaaliyaha
Liiska hantida iyo dukumiinti dheeraad ah